RIU dia mampiditra kafe 120 taonina avy amin'ny ala maharitra isan-taona ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny
Home » Vaovao momba ny fizahantany tompon'andraikitra » RIU dia mampiditra kafe 120 taonina avy amin'ny ala maharitra isan-taona ao amin'ireo trano fandraisam-bahiny
Novambra 2, 2017
Tao anatin'ny herintaona monja dia handany kafe 120 taonina avy amin'ny toeram-piompiana voamarin'ny Rainforest Alliance ireo vahiny ao amin'ny hotely RIU any Eropa, Afrika ary Azia.
RIU Hotels & Resorts dia nanao dingana hafa iray ho amin'ny fampandrosoana maharitra ny orinasa amin'ny alàlan'ny fampidirana kafe izay mitondra ny tombo-kase Rainforest Alliance Certified ao amin'ireo hotely 48 any Eropa, Afrika ary Azia. Ity kafe ity dia ambolena amin'ny fomba maharitra mba hahasoa ny fianakaviana monina amin'ny toeram-piompiana, ary koa ny bibidia sy ny tontolo iainana eo an-toerana.
Ity hetsika ity dia noraisin'ny departemanta mividy hotely RIU miaraka amin'ny mpamatsy Emicela hanohanana ny fampandrosoana maharitra eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Vokatr'izany, ao anatin'ny herintaona monja, ny vahiny ao amin'ny hotely RIU any Eropa, Afrika ary Azia dia handany kafe 120 taonina avy amin'ny toeram-piompiana voamarin'ny Rainforest Alliance izay mampiasa fomba fanao maharitra. Ireo toeram-piompiana ireo dia manaraka fenitra feno momba ny fambolena maharitra izay miaro ny tontolo iainana sy mampiroborobo ny zon'ny mpiasa sy ny fianakaviany ary ny fiarahamonin'izy ireo.
Ny kafe voamarina dia efa misy ao amin'ny hotely any amin'ny Nosy Canary, Cape Verde, Portugal, Andalusia, ny Nosy Balearic, Mauritius ary Sri Lanka. Amin'ny ho avy, ny RIU dia manantena ny hanohy handray izany sy ireo vokatra maharitra hafa any amin'ireo hotely rehetra manerantany.